हाम्रो पार्टीमा पनि गणेश प्रवृति मौलाएको ?
२०६९ सालमा नेपाली राजनीतिमा निकै ठूलो तरंग आयो । जुन तरंगले नेपालका पहिचानवादीहरुको एउटा नयाँ पार्टी स्थापना भयो । जुन पार्टी निर्माणका लागि तत्कालीन नेकपा एमाले उपाध्यक्ष अशोक राई लगायत धेरैजना शीर्ष तहका नेताहरुले एमाले छाेडे भने नेपाली कांग्रेस, माओवादी लगायत थुप्रै पार्टीबाट बिद्रोह गरी २०६९ साल मंसिरमा अशोक राईको नेतृत्वमा संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल नामकाे नयाँ पार्टी गठन भयो ।
सोही पार्टीको भातृ संगठनको रूपमा पहिचानवादी विद्यार्थीहरुलाई संगठित गर्दै अग्रगामी विद्यार्थी युनियन निर्माण भयो । सो संगठन निर्माणसँगै विद्यार्थी आन्दोलनलाई नयाँ आन्दोलनको रूपमा विकास गर्दै लैजाने उद्घोष गरियो । र, हामी पनि खोटाङ जिल्लाबाट समाहित भयाै ।। त्यहीँ क्रममा २०७० साउन २७ गते पार्टीको केन्द्रीय समितिले आयोजना गरेको बृहत नागरिक भेला काठमाडौंको सभागृहमा हुँदा तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य युक्सन किरातमार्फत संगठनको तत्कालिन केन्द्रीय उपाध्यक्ष विवेक राईसँग मेराे भेट भयो ।
सुरुमा भेट हुँद अत्यन्तै साधारण देखिने व्यक्ति केन्द्रीय उपाध्यक्ष भन्दा झन्डैझन्डै विश्वास लागेन । म त्यो बेला खोटाङ जिल्लाकाे सचिव थिएँ । पछि उहाँसँग भेटघाट र सम्पर्क बढ्दै गयो । संगठनको तत्कालीन केन्द्रीय अध्यक्षले राम्रोसँग संगठन हाक्न सकेनन् । त्यसैले पनि नयाँ संगठन निर्माण गर्नु फलाम चिउरा चपाउनु जस्तै बन्यो । केही समयमै अध्यक्षले संगठन छोड्नु भयो । त्यसपछि उपाध्यक्षको हैसियतले संयोजकको जिम्मेवारी विवेक राईको काँधमा आइपर्यो ।
त्यो बेलासम्ममा म खोटाङको संयोजक भइसकेको थिएँ । सोही कारण पनि हामीबीच सम्पर्क, सहकार्य बढ्यो । नयाँ पार्टीको देशभर जनलहर चलेको थियोे । पहिचान र समानुपातिक समावेशीको एजेन्डा देशको प्रमुख एजेन्डा बनेको थियो । सोही एजेन्डा पेचिलो बनेको कारण पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकी संविधानसभालाई नै भंग गरिएको थियो ।
त्यहीँ समय थियो पुरानो यथास्थिति पार्टीहरुबाट अब मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने निक्र्योल गर्दै नेकपा एमाले, कांग्रेसजस्ता पार्टी परित्याग गर्ने लहर नै चलेको थियो । त्यस बखत पार्टी व्यवस्थापनमा निकै चुनौती थपिएको थियो । कसलाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर । त्यहीँ बेला पार्टीले चुनावको सामना गर्नुपर्यो । चुनाव मात्रै होइन त्यहीँ बेलादेखि पुरातनवादी र यथास्थितिवादीहरु टाउको उठाएर सलबलाउन थालेका थिए ।
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न सडक आन्दोलन गर्नुपर्यो । आन्दोलनको घोषणा भयो । हामी आन्दोलनमा होमिएर सडक तताउन थाल्यौ । हाम्रो आन्दोलनले चुनावलाई प्रभावित पार्न सक्ने अनुमान गर्दै सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने सहमति ग¥यो । फलस्वरूप समानुपातिक ४० प्रतिशत र प्रत्यक्ष ६० प्रतिशतलाई समानुपातिकमा ६० प्रतिशतलाई कायम गरियो । र, विदेशमा रहेको नागरिकहरुलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर सहमति भयो (अहिलेसम्म यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ) । पार्टी चुनावमा होमियो । २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनको नतिजा आयो ।
पार्टी स्थापना हुना साथ संगठन निर्माण गर्ने पर्याप्त समय नपाएकै अवस्थामा निर्वाचनमा जानु परेकाेले अपेक्षित मत परिणाम आएन । मत परिणामपछि पार्टीका धेरै नेता-कार्यकर्ताहरुमा निराशा छायो । धेरै निष्क्रिय रहे । हामीले आशा र भरोसा गरेका कतिपय नेताले त पार्टी नै छाडे । त्यो बेला विद्यार्थीहरुलाई संगठित गरेर नयाँ संगठन निर्माण गर्नु साच्चै फलामको चिउरा चपाउनु सरह थियोे ।
त्यसै पनि सानो पार्टीको सानो संगठन भने पछि हामीलाई र हाम्रो संगठनलाई न पत्याउने अर्को हाम्रो लागि चुनौती थियो । यस्तो कठिन परिस्थितिमा चुनौती नै चुनौतीको बीचमा विवेक राईले नेतृत्व लिएर संगठन हाकेका थिए । उहाँको नेतृत्वमा २०७१ साल पुस १,२ र ३ गते पोखरामा राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो । सम्मेलनले सहमतिमा उहाँलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी फेरि सुम्पियो ।
उहाँले जिवनको कुनै प्रवाह नगरी ज्यानको बाजी राखेर संगठनमा लाग्नुभयो । उमेरले पनि ३५ हाराहारीको उहाँलाई हामीले बेलाबेलामा तपाईंले अब त नयाँ जीवनको सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर गिजाएको पारामा सम्झाइरहेका हुन्थ्यौ । तर उहाँले नयाँ जीवनलाई भन्दा नयाँ संगठनलाई प्राथमिकतामा राख्नुभयो । संगठनको नेतृत्व रहँदा जीवन नै संगठन हो भनेर लाग्नुभयो ।
२०७२ सालमा एजेन्डा मिल्ने तीन पार्टीहरुले एकता गरेर संघीय समाजवादी फोरम नेपाल भयो । पार्टी एकतापछि संगठनहरुको पनि एकता भयो । विद्यार्थी संगठनहरुको एकता खाका बन्यो । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार विद्यार्थी फोरमको अध्यक्ष पार्टी केन्द्रीय सदस्य साथै विद्यार्थी इन्चार्ज रहने र तत्कालीन अग्रगामी विद्यार्थी युनियनको अध्यक्षले फेरि संगठनको नेतृत्व गर्ने भनी भएको सहमति अनुसार उहाँले संगठन हाक्नु भयो ।
२०७५ सालसम्म आइपुग्दा नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकता भयो । पार्टी एकतापछि विद्यार्थी संगठनहरुबीच पनि स्वभाविक रुपमा एकता हुने भयो । तत्कालीन नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनको अध्यक्ष पार्टीको केन्द्रिय सदस्य हुनुभयो भने उपाध्यक्ष अहिले हाम्रो संगठन एकता पछिको समाजवादी विद्यार्थी युनियनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
अहिले उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको विद्यार्थी संगठनको नेताहरु पार्टीकाे महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । तर अशोक राई नेतृत्वको विद्यार्थी नेताहरुलाई त्यो जिम्मेवारी कहाँ छ ? कठिन परिस्थितिमा संगठन र पार्टीलाई काँध थाप्ने विवेक राई आज पार्टीको कुन जिम्मेवारीमा छन् ? के विवेक राई केन्द्रीय सदस्य हुन अयोग्य हुन् ? आज विवेक राई किन निष्क्रिय छन् ? विवेक राईको योगदानलाई किन अवमूल्यंकन गर्न खोजिदैछ ? विवेक इमान्दार छ कुनै पद माग्दैन चुपचाप बस्छ भनेर जिम्मेवारविहीन बनाउन पाइन्छ ? कतै हाम्रो पार्टीमा पनि गणेश प्रवृति मौलाएको सन्देश दिन खोजेको त होइन ?
हामीलाई थाहा छ क्षमतामा उहाँ पार्टीको कुनै नेता भन्दा कम हुनुहुन्न । सबैभन्दा इमान्दार हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पार्टीको नेतृत्वहरुले गम्भीरतार्पूवक ध्यान दिन जरुरत छ । यो लेख लेखिरहँदा एउटा व्यक्तिलाई केन्द्रित गरिएको भन्ने लाग्न सक्छ । झट्ट हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ तर विवेक राई एउटा व्यक्ति मात्रै होइन । उहाँ हजारौं विद्यार्थीको नेता हो । नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व हो । उहाँले हाम्रो संगठनमा हजारौं विद्यार्थी संगठित गर्नु भएको छ । वर्षौं यहीँ आन्दोलनमा जीवन व्यतित गर्नु भएको छ । आज हामी त्यहीँ बाटोमा छौं । आज पार्टीले उहाँलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन भने भोलि हामी र हामी जस्ता हजारौं विद्यार्थी नेताहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ ? हामी पनि आज संगठनमा ज्यान दिएर लाग्ने अनि भोलि विद्यार्थी संगठनबाट आउट भएपछि निष्क्रिय भएर बस्नुपर्ने हुनसक्छ ।
आज पार्टीभित्र युवाहरुको नेतृत्व माग भइरहेको बेला पार्टीले युवाहरुलाई विश्वासमा लिएर निष्क्रिय होइन जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । अन्य पार्टीमा पनि विद्यार्थी संगठनकाे नेतृत्व गरिसकेको नेताहरूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने गरेको छ । हाम्रो पार्टीले विद्यार्थी संगठनलाई काम लाग्यो भाडो काम सकियो ठाडो भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ नगरोस् । सबैलाई आ-आफ्नो योग्यता, योगदान, कृयाशिलता र क्षमताअनुसार व्यवस्थापन गरियोस् । धन्यवाद ।
(खम्बु समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारबाट भाग्नु सरकारको गैरजिम्मेवार चरित्रको पराकाष्ठा